फेरि आन्दोलनमा उत्रिए राहत तथा अस्थायी शिक्षक, यो पटक पूरा होलान् माग? - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि आन्दोलनमा उत्रिए राहत तथा अस्थायी शिक्षक, यो पटक पूरा होलान् माग?
काठमाडौं, चैत २० । अस्थायी शिक्षक फेरि काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । फेरि आन्तरिक परीक्षाको माग गर्दै उनीले प्रदर्शन उत्रिएका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरुले गोल्डेन ह्याण्डसेकमार्फत विदाई गर्न सरकारसँग अर्को विकल्प अघि सारेका छन् । उनीहरुले गोल्डेन ह्याण्डसेक नदिएर विस्थापित गर्न लागेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।